Xildhibaan booqatay qoyska Caasho Ilyaas oo dil iyo kufsi loogu geestay Gaalkacyo – Kalfadhi
Xildhibaan booqatay qoyska Caasho Ilyaas oo dil iyo kufsi loogu geestay Gaalkacyo
in Aragti, Warar
Xildhibaan Farxiyo Xasan Cali oo katirsan baarlamaanka Galmudug iyo Haween kale ayaa booqday qoyska Caa’isho Ilyaas Aadan oo dil iyo kufsi loogu geestay Waqooyiga magaalada Gaalkacyo ee xarunta Gobalka Mudug dabayaaqadii bishii 2aad ee sanadkaan.
Xildhibaan Farxiyo ayaa Kalfadhi u sheegtay in ay la kulmeen Hooyada dhashay Marxuum Caa’isho iyo Walaalaheed islamarkaana ay uga soo tacsiyeeyeen dhibkii gaaray, waxayna sidoo kale ka wareesteen halka ay marayso dadaalkii cadaalad raadinta ee ku aadan dadkii dhibka geestay.
“Waxaan soo arkay Hooyo Alle ku xiran oo aad u niyad wanaagsan waliba samir badan kuna qanacsan qadarta Alle”ayey Kalfadhi u sheegtay Xildhibaan Farxiyo Xasan Cali oo katirsan xubnaha baarlamaanka Galmudug ee Soomaaliya.
“Waxaan soo aragnay dharkii ay xiran jirtay Caa’isha, qolkii iyo sariirtii ay ku seexan jirtay, goobihii ay ku Cayaari jirtay iyo Buugaagtii ay wax ku baran jirtay” ayey u sheegtay Kalfadhi Xildhibaan Farxiyo Xasan Cali oo ku sugan magaalada Gaalkacyo ee xarunta Gobalka Mudug.
Ujeedada socdaalka Xildhibaan Farxiyo Xasan Cali iyo dumar kale oo la socda ayaa waxay ku sheegeyn in ay aheyd kawarqabka qoyska dhibka gaaray iyo in ay la soo qaybsadaan xanuunka aan dhamaadka laheyn oo ay wajahayaan waxayn ku taliyeen in ay cadaalad helaan qoyskaasi.
“Iima suurta gelin in aan helo Aabaha Caa’isho waxa uu Isbitaal kula jiray wiil ka xanuun, laakiin xaqiiqdii waa qoys aad u niyad wanaagsan oo Alle ka cabsi badan, waxaan ku baaqayaa in cadaaladda la marsiiyo dadkii falkaasi ka dambeeyay” ayey hadalkeeda sii raacisay Farxiyo Xasan Cali oo la hadasahya Kalfadhi.
Farxiyo Xasan Cali ayaa ugu baaqday dhamaan ragga Soomaaliyeed in ay ka qayb qaataan Olalaha ka hortagga kufsiga si looga suuliyo dalka oo dhan. Xildhibaan Farxiyo ayaa sheegtay in dhibaato badan ay wajahaan dumarka Soomaaliyeed loona baahan yahay in si wadajir ah loo suuliyo dhibaatada Kufsiga ee dalka ka jirta.
“Ragga Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa in ay ka qayb-qaatana Olalaha suulinta Kufsiga iyo Xadgudubka Dumarka, waxaan nahay Walaalahood, Xaasaskoodii iyo Hooyadii dhashay Alle haka cabsadaan wiilasha Soomaaliyeed” ayey tiri Xildhibaan Farxiyo Xasan Cali
“Odayaasha Soomaaliyeed waxaan ka baryaa oo aan ka codsanaa in ay naga joojiyaan xeer jajabka iyo kadaba cararka kuwa kufsiga noo geesta” ayey hadalkeeda ku soo gaba-gabeysay Xildhibaan Faxriyo Xasan Cali oo l hadashay Kalfadhi.
Aqalka Sare oo koox Midowga Yurub u qaabilsan Taageerada Miisaaniyadda kula kulmay Muqdisho
Wasiirka cusub ee Dastuurka Soomaaliya oo maanta xilkiisa la wareegay